မကြာခင်ထွက်ရှိလာမယ့်အသည်းကွဲသီချင်းရဲ့ ရိုက်ကွင်းနောက်ကွယ်ကပုံရိပ်တွေကို ဝေမျှလာတဲ့ ဝိုင်းလေး - Cele Gabar
မကြာခင်ထွက်ရှိလာမယ့်အသည်းကွဲသီချင်းရဲ့ ရိုက်ကွင်းနောက်ကွယ်ကပုံရိပ်တွေကို ဝေမျှလာတဲ့ ဝိုင်းလေး
By bagyiaungPosted on July 17, 2020
ဝိုင်းလေးကတော့ အိမ်မက်ဆုံရာကစပြီး အခုအချိန်မှာ ပရိသတ်အချစ်တွေကို သိမ်းကြုံးရယူထားနိုင်တဲ့ နာမည်ကျော်အဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်လာသူပါ။ သီချင်းတွေကိုချစ်တဲ့ဝိုင်းလေးကတော့ ပရိသတ်တွေကို အသစ်အဆန်းတွေချပြဖို့ အမြဲကြိုးစားနေသူတစ်ယောက်ပါ။ အခုလည်း ရိုက်ကွင်းနောက်ကွယ်ကပုံရိပ်လေးတွေကို မျှဝေလာပါတယ်။
ဝိုင်းလေးကတော့ သူ့ရဲကဖေ့ဘွတ်ခ်မှာ “ကွဲ ငါ့ရဲ့မရှိတဲ့ အသည်းတွေ ထပ်ပြီး ကွဲ..လူကြားသူကြားမှာ နင့်အတွက် အရှက်လည်းကွဲ..
ရင်တွေကွဲ…ရီဝေရင်းနဲ့… ပုလင်းရဲ့ လက်ကျန်.. ကွဲ… မကြာမီ တင်ဆက်မည့် ဝိုင်းလေးရဲ့ သီချင်းသစ် တစ်ပုဒ် အများကြီးကြိုးစားထားပါတယ်…အချစ်နဲ့ပတ်သတ်ရင် အားလုံးအသည်းကွဲဖူးကြမယ်လို့ထင်တယ် ! အသည်းကွဲတဲ့အခါ ဘယ်လိုခံစားရလည်း????” ဆိုပြီးတော့လည်း ရေးသားထားပါတယ်။ ဝိုင်းလေးကတော့ရိုက်ကွင်းနောက်ကွယ်မှာ အပီအပြင်တွေသရုပ်ဆောင်နေတာပါ။
ဝိုင်းလေးရဲ့အချစ်သီချင်းတွေ အသည်းကွဲသီချင်းတွေကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့အကြိုက်နဲ့ထပ်တူကျပြီး အောင်မြင်ခဲ့တာပါ။ အခုတစ်ခါမှာလည်း အသည်းကွဲသီချင်းဖန်တီးနေတာဖြစ်ပြီး အဆွေးဓာတ်ခံရှိသူတို့ ကြိုက်နှစ်သက်ဦးမယ်ထင်ပါရဲ့နော်…
Source : WyneLay
Posted in Cele NewsTagged Cele, Cele Gabar, Celebrities, Celebrities Myanmar, Celebrity, Celebrity Myanmar, Myanmar Cele, Myanmar Celebrities, Myanmar Celebrity, Wyne Lay, ဆယ်လီ, ဆယ်လီမြန်မာ, မြန်မာဆယ်လီ, ဝိုင်းလေး
Previous post ဒါရိုက်တာကိုပြည့်ဝ(ပန်းဝေသီ)အတွက် ကျန်းမာရေးထောက်ပံ့ငွေသွားရောက် လှူဒါန်းပေးခဲ့တဲ့ တက္ကသိုလ်ဂွမ်းပုံ
Next post မြောက်ဥက္ကလာက သားသမီးကျောထောက်နောက်ခံမရှိတဲ့အဖိုးနဲ့ အဖွားကို ထောက်ပံ့လှူဒါန်းသွားမယ့် နေဒွေး